Kooxda Selo Group waxay iskaashi la samaysaa Chef Meyrick si loo horumariyo khibradaha cunnada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Kooxda Selo Group waxay iskaashi la samaysaa Chef Meyrick si loo horumariyo khibradaha cunnada
kariska • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dadka • Wararka Singapore • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Kooxda Selo Group waxay iskaashi la leedahay Chef Will Meyrick
Selo Group, oo ah shirkad ku guuleysatay abaalmarinta oo si buuxda isugu dhafan oo fadhigeedu yahay Singapore, ayaa maanta ku dhawaaqday cunno-kariye caalami ahaan loo aqoonsaday iyo makhaayad caan ka ah Will Meyrick inuu yahay lammaaneheeda cusub.
Cunto -kariyuhu wuxuu horumarin doonaa waayo -aragnimo cusub oo cunto -karin ah oo loogu talagalay mashaariicda ma guurtada ah ee Selo.
Meyrick wuxuu noqday magac qoys oo ku yaal Indonesia oo leh toddoba maqaayadood oo guulaystay suunka hoostiisa.
Selong Selo Resort & Residences, oo laga furay xeebta dabiiciga ah ee Koonfurta Lombok ee Indonesia sanadkii 2016, ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee aragta hal -abuurka Cunnada ee Meyrick.
Meyrick wuxuu u keeni doonaa hodantinimadiisa hodanka ah si uu u horumariyo waaya-aragnimada cusub ee cunnada una kormeero barnaamijyada cuntada iyo cabitaanka ee mashaariicda hantida maguurtada ah ee Selo, oo ay ku jirto hantideeda calanka leh ee abaalmarinta leh Dalxiiska Selong Selo & Deganaanshaha ee Lombok, Indonesia.
"Will wuxuu aad u yaqaana suuqyada Indonesia wuxuuna halkaas ka ahaa ganacsade guuleysta in ka badan 25 sano isagoo ah milkiilaha dhowr maqaayadood oo ku yaal Bali, sidaa darteed isagu waa murashaxa ugu fiican inuu hoggaamiyo dadaallada culus ee mashaariicdayada," ayuu yiri Andrew Corkery, Kooxda SeloMaamulaha guud. "Waan ognahay in martideena ay ku raaxeysan doonaan hal -abuurkiisa, aqoontiisa ballaaran iyo xiisaha cad ee safarka iyo isku xirnaanta cuntada."
Hormuudka boqortooyada cuntada, Meyrick wuxuu sumcad ku dhisay riixitaanka xuduudaha. Xirfadiisu waxay u horseeday London ilaa Sydney iyo ugu dambayn Koonfur Bari Aasiya, halkaas oo uu hadda deggan yahay. Ka dib markii uu ka shaqeeyay laba maqaayadood oo hormuud ka ah Sydney, Meyrick wuxuu ku dhiiraday Indonesia, Thailand iyo Hong Kong si uu u helo fursado cusub wuxuuna jeclaaday jasiiradda yar ee Bali, halkaas oo uu ka aasaasay boqortooyadiisa cunnada, Sarong Group.
Waxa uu noqday magac qoys oo ku yaal Indonesia oo leh toddoba maqaayadood oo guulaystay oo suunka hoostiisa ku jira, oo ay ku jiraan Sarong, Mama San, Hujan Locale ee Ubud, Billy Ho Izakaya Japanese ee Canggu, iyo Monsoon ee Bartamaha, Hong Kong. Marka lagu daro boorsooyinkiisa makhaayadaha iyo buugaagta wax lagu karsado, Meyrick waxaa lagu arki karaa doorar joogto ah oo ku saabsan barnaamijyada TV -ga qaranka iyo kuwa caalamiga ahba sida Indhaha Indonesia ee Chef franchise iyo Back to the Streets on Asian Food Channel, iyo sidoo kale YouTube iyo Discovery Channel taxane u gaar ah.
Selong Selo Resort & Residences, oo laga furay xeebta dabiiciga ah ee Koonfurta Lombok ee Indonesia sanadkii 2016, ayaa noqon doonta tii ugu horreysay ee aragta hal -abuurka Cunnada ee Meyrick. Hantida ayaa 25 daqiiqo u jirta gegida diyaaradaha caalamiga ah ee Lombok waxayna bixisaa in ka badan 50 guri oo raaxo leh oo leh hal ilaa toddoba qol jiif, hudheel adeeg buuxa leh, guri naadi, Aura Bar & Lounge, naadiga carruurta, iyo helitaanka naadiga xeebta. Agagaarka goobta loo dalxiis tago waxaa ku yaal 20 guri oo raaxo leh oo gaar loo leeyahay oo diyaar u ah iibinta istuudiyaha, hal ama laba qol oo ikhtiyaar ah oo leh barkad gaar loo leeyahay.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Kooxda Selo iyo mashaariicdeeda, fadlan booqo www.selogroup.co
Kooxda Selo waxay leedahay taariikh la hubo oo ku saabsan tayada dhismaha, ku-guuleysiga abaal-marinnada hudheelada raaxada leh iyo fiilayaasha waqtiga iyo miisaaniyadda, illaa heerarka caalamiga ah ee ugu sarreeya. Habka ganacsiga waxaa lagu dhisay helitaan, horumar, iyo hawlgal. Kooxda caalamiga ah ee khibrada u leh shirkadu waxay kormeeraan naqshadeynta, iibinta hantida iyo suuqgeynta, dhismaha, iyo hawlaha hoteelka iyo goobaha dalxiiska. Kooxda Selo waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo horumarineed, dhisme, hawlgallo, iyo adeegyo maareyn, iyagoo kormeeraya mashaariicda min bilow ilaa dhammaad iyagoo leh ballanqaad adag oo ah joogtaynta. Iyada oo loo marayo is -dhexgal toos ah, kooxdu waxay qabataa wax -ku -oolnimada naqshadeynta, iibinta iyo jaangooyooyinka dhismayaasha ee ku sii qulqulaya goobaha dalxiiska ee hawlgalka. Teknolojiyadda cagaaran ee Selo iyo naqshadeynta waxay muujineysaa ballanqaad ku aaddan mabaadi'da sii jiritaanka hababka dhismaheeda, hawlgallada gudaha, iyo ka -qaybgalka bulshooyinka maxalliga ah iyo deegaanka dabiiciga ah.